Meyd Qabriga Laga Soo Saaray Si Looga Saaro Dharka Laga Aasay Iyo Ujeedada Laga Leeyahay | Himilo Media Group
Meyd Qabriga Laga Soo Saaray Si Looga Saaro Dharka Laga Aasay Iyo Ujeedada Laga Leeyahay
Kenya, 15 August, 2019 (Himilo)-Mas’uuliyiinta Ismaamul goboleed ku yaalla galbeedka dalka Kenya ayaa qabri kasoo qufay meydka nin deegaankaas kasoo jeeda, si looga bixiyo dhar lagu aasay isagoo xidhan.
Ninkan oo lagu magacaabi jiray Martin Shikuku Alukoye ayaa bishan gudaheeda dhintay ka dib markii uu biyo ku haftay, waxaana la aasay isagoo xidhan guud ahaan direyskii adeegga dhallinyarada ee ismaamulka Kakamega.
Saraakiisha maxalliga ah ayaa qabriga kasoo saaray meydka, iyadoo ujeeddadu ay ahayd oo kaliya in dharkaas laga siibo, iyagoo iska dhego tiray diidmo ka jirtay dhinaca qoyska uu ninkaas kasoo jeeday.
Haweeneydii xaaskiisa ahayd, ee uu ka dhintay, ayaa BBC-da laanteefa Af Sawaaxiliga u sheegtay inay aad uga argagaxday falkaas, waxayna intaas ku dartay in soo qufitaanka meydka uu kusii badiyey xanuunkii ay markii horeba ka qaadday geeridiisa.
“Tallabadan waxay igu sii kordhisay murugada aan markii horeba ku jiray, carruurteyduna wali way yayar yihiin, ilaa maalintii aan dhashay ma arkin wax sidaan oo kale ah, waxaan ka codsan lahaa inay iska key dhaafaan”, ayey tidhi
Mr Alukoye adeerkiis ayaa isna yidhi “Waxay ku xad gudbeen sharciga dhulka iyo xeerkii awoowayaasheen”.
Francis Mutamba oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa intaas ku daray: “Markii aan aaseynay waxaan si buuxda ugala tashannay ismaamul goboleedka manay diidin codsigayagii ahaa inaan ku aasno dharkiisii shaqada”.
Qoyska ayaa sheegay inay kasoo horjeesteen codsiga ka yimid dowladda deegaanka ee ku saabsanaa soo qufitaanka meydka ninka 31 jirka ahaa, si dharka looga bixiyo, hase yeeshee, markii dambe waxay saraakiishu tallaabadaas qaadeen iyagoo aan cidna la tashanin, amar maxkamadeedna heysanin.
“Mar haddii meydka la aaso, qof walba oo dood ka qaba waa inuu la yimaado amar maxkamadeed oo u oggolaanaya inuu qabriga soo qufo. Mas’uuliyiinta maamul goboleedku waxay sameeyeen arrin sharciga kasoo hor jeedda”, ayuu yidhi isagoo wareysi siinayay wargeyska Daily Nation.
Odayaasha beesha Abang’onya ayaa sidoo kale dhalleeceeyay maamulka, waxayna arrinta meydka lasoo qufay ku tilmaameen wax sharciga iyo dhaqankaba kasoo horjeeda.
“Waxaan aasnay wiilkeenna xilli habeennimo ah annagoo u hoggaansameyna dhaqankeenna oo dhigaya in qofka biyaha ku dhinta aan la aasin xilli ay qorraxdu soo jeeddo, laakiin masuuliyiinta maamulku waxay naga yaabiyeen markii ay meydka usoo qufeen dharkooda dartiis”, ayuu yidhi Mr Mutamba.
Meydka lasoo bixiyay ayaa loo xidhay dhar kale, dib ayaana loo aasay.